Nihodinan’ny Vohikala Sosialy Shinoa Ny Sivana Mba Hanomezam-boninahitra Ilay Mpitondra Fiovàna Hu Yaobang · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Mey 2013 23:43 GMT
Nihodinan'ireo Shinoa mpampiasa aterineto ny sivana aterineto hentitra any amin'ny fireneny mba hanomezam-boninahitra an'ilay mpitarika antoko kaominista taloha sady mpitondra fiovàna fanta-daza, Hu Yaobang, izay nitarika ireo fihetsiketshehana tany amin'ny Kianjan'i Tiananmen ny fahafatesany 24 taona lasa izay.
Nahafaly vahoaka shinoa maro ny fanohanan'i Hu ireo fanovàna ho an'ny tsena malalaka sy ny fangaraharan'ny governemanta nandritra ny naha-sekretera jeneralin'ny Antoko Kaominista Shinoa azy tamin'ny 1982 hatramin'ny 1987, nefa nahatonga azy ho fahavalon'ireo mpitarika antoko matanjaka sasany.
Hatramin'ny nahafatesany, Hu, izay voaroaka tao amin'ny antoko kaominista, dia nijanona ho lohahevitra saropady tany Shina. Na teo aza ny fanadiovan'ny governemanta shinoa azy tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 2005, mbola voarara ny anaran'i Hu ao amin'ny vohikala fitoraham-bilaogy madinika malaza indrindra any Shina, Sina Weibo.
Tsy nisy vokany ny fikarohana ny anarany tao amin'ny Weibo tamin'ny 15 Aprily, fa manao hoe:
Araka ireo lalàna sy fepetra mifandraika amin'izany dia tsy azo valiana ny fikarohana ho an'ny “Hu Yaobang”.
Na izany aza, nanandrana nandingana ny sivana ireo mpampiasa aterineto tamin'ny fanasiana elanelana na sarina labozia manelanelana ireo teny shinoa telo mamorona ny anarany. Ny mpampiasa aterineto sasany dia nilaza fotsiny hoe Hu na nandrehatra labozia virtoaly fa tsy nanondro azy tamin'ny anarany.
Ary nahagaga fa nisy haino aman-jerim-panjakàna sasany koa nandray anjara tamin'izany fanomzeam-boninahitra izany. Liberation Daily, an'ny fanjakàna Shinoa dia nideradera [zh] an'i Hu, ka nozaraina an'arivony maro tao amin'ny Weibo izany:
“Jiao Yantian”, mpahay sary dia namorona sarin'i Hu Yaobang (sary avy amin'ny Sina Weibo)
Zava-dehibe ny fanomezam-boninahitra an'i Yaobang amin'ny fotoana izay ilàn'i Sina maka fepetra fanampiny amin'ny resaka fanovàna sy mandroso amina pejy hafa anatin'ny tantarany. Amin'izao fahatsiarovantsika an'i Hu Yaobang izao, tokony hanana ny fahavononana hitondra fiovàna ary ny herim-po hanavao zavatra tahaka azy isika.
Nampahatsiahy [zh] ny nolazain'i Hu ilay mpisolovava Xu Xin:
Tadidiko izy nilaza hoe: “Zava-dehibe ny fahafahana mampiato ny kolikoly sy ny fanararaotam-pahefàna ho an'ny fahavelomana sy ny fahafatesan'ny antoko; tokony hiezaka isika hanana ny fahavononana, fikirizana ary faharetana lehibe indrindra mba hamahàna izany olana izany hatramin'ny farany; Mba hamahàna izany olona izany dia tsy afaka manao izay tian'ny olona, na matahotra ny hanohintohina olona isika.
“Jiao Yantian”, mpahay sary dia namorona sarin'i Hu ary nilaza [zh]:
Milazà ny marina dia azonao ny fon'ny vahoaka, manaova zava-marina dia hotsiahivina mandritra ny andian-taranaka iray ianao.
Na i Hu Xijin aza, tonian-dahatsoratra ao amin'ny gazetim-panjakàna Shinoa Global Times, dia nanamafy [zh] hoe :
Tokony hanana ny herim-po hamerina ny tantara isika. Tokony haka lesona avy amin'ny lasa, ary handroso amin'ny hoavy miaraka amin-kery sy fahendrena. Tsaroantsika sady sainintsika lalina izao, ny tsingerintaona nahafatesan'i Hu Yaobang.
Ireo mpikambana sasany dia nampiasa ny fanehoan-keviny ho sehatra fampitahàna ny Shina tamin'ny andron'i Hu sy ny ankehitriny.
Nanoratra [zh] i “Tan Feizi”, mpampiasa aterineto :
Be fandeferana sady nalalaka kokoa ny andron'i Hu Yaobang teo amin'ny tantaran'i Shina tamin'ny mbola tafiditra lalina tamin'ny raharaham-pirenena ny tanora ary tia manao adihevitra filozofika. Tanaty fivoarana tanteraka ny fiaraha-monina shinoa tamin'ny ankapobeny tamin'izany. Tsara lavitra noho ny ankehitriny raha resaka fironana ara-politika sy fandeferana ara-tsosialy.
“0931_Lee”, mpampiasa aterineto hafa dia nanasongadina [zh] ny tsy fahampiana mpitarika goavana any Shina hatramin'ny nahafatesan'i Hu:
二十四年了 你为之奋斗了一生的国家 变的越来越差 到目前为止再也没有出现过像你和赵公那样伟大的人物 你像灯塔一样在指引着我们 永远怀念您。
24 taona. Miharatsy hatrany ny firenena nitolomanao mandra-pahafaty fahiny. Hatreto dia tsy mbola nisy lehilahy goavana tahaka anao sy Zhao Ziyang. Ianao no jiro nitarika anay, hotsaroanay mandrakizay ianao.